Garsoore sarqaansan oo kaarka cas siiyey tiro ciyaartooy ah VIDEO+SAWIRO – SBC
Garsoore sarqaansan oo kaarka cas siiyey tiro ciyaartooy ah VIDEO+SAWIRO
Yaab & amakaaga ayaa soo food saarey ciyaartoydii iyo taageerayaashii laba koxoood oo ka dhisan wadanka Czech oo horey uga mid ahaa Jamhuuriyadii burburtey ee Czechoslovakia ka dib markii garsoorihii dhexdhexaadinayey ciyaarta kubada cagta ah oo qamri ka soo dhargay uu banaanka uga saarey garoonka qaar ka mid ah ciyaartoydii ka dib markii uu siiyey kaarka cas (red card).
Tomas Fidra oo ka mid ah garsoorayaasha heerka caalamiga ah ee dalka Czech ayaa dhexdhexaadinayey ciyaar ka mid aheyd horyaalka wadankaasi u dhaxeysay labada kooxood ee kala ah Jestrabi Lhota & Tynec-nad-Labem oo ah laba kooxood oo xifaaltan dhanka kubada cagta uu ka dhaxeeyo ayaa qiso la ayaab leh oo aan horey loo maqal ku dhaqaaqay isagoo ciyaartoygii la hadlaa iska daa kaarka hurdhiga (yellow card) caasha u galiyey red card kaarka casa ma rooso.
Tomas ayaa la sheegay in ka hor intii aanay ciyaartu bilaaban uu si xad ka bax uga soo dhergay qamri isagoo sarqaansana garoonka soo galey oo firimba u qaatey sidii uu dhexdhexaadin lahaa ciyaartaasi kubada cagta ah oo aadka u adkeyd.
Garsooraha ayaa la sheegay ka hor bilowga ciyaarta in uu ka hadlayey xafladiisa dhalashada oo uu ka soo tagey taasi oo loo qaatey in uu si xadka ka baxsan uu isaga soo waraabiyey qamri.
Fidra ayaa markii garoonka uu soo galayey wuxuu u muuqdey qof aan cago adag ku taagneyn, isagoo mar marka qaarna dhac dhacayey intii ciyaartu socotey.
Qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda Jestrabi ayaa su’aalay garsooraha waxa ka si ah iyagoo si edeb ah oo degan ula hadley balse sadex ka mid ah ciyaartoyda ee su’aashaasi waydiiyey ayuu banaanka u saarey isagoo u taagey kaarka cas arintaasi oo la yaab iyo qosol dhalisay.
Laakiin arintii ugu qosolka badneyd ayaa aheyd markii ciyaartoydii kooxda kale ay isku raaceen in aanay weerarin kooxda ay iska soo horjeedeen oo ay garoonka ugu soo hareen 8 ciyaartod oo kaliya, iyado xiligaasi ciyaartu ay ka dhimaneyd 30 daqiiqo, waxaana ay ku soo dhamaatey barbardhac 1-1 ka dib markii kubada laga dhigay mid dhexda uun lagu hayo.
“Neeftiisa iyo waliba urkiisa ayaa waxaa ka soo karkarayey qamri, mana aanu qarsan in ka soo qayb galey xaflad dhalasho” sidaasi waxaa yiri mid ka mid ah gudiga kooxda Jestrabi Lhota oo wareysi siiyey wargeyska Lidove Noviny ee ka soo baxa wadanka Czech..
Dusek ayaa sheegay inaanay laheyn door kale oo aan ka aheyn inay ciyaarta iska sii wadaan ciyaarta, inkastoo garsooruhu uu sarqaansaa.
“Ma jiro wax sharci ah oo u diidaya garooruhu in uu qamri soo cabo isagoo ciyaar dhexdhexaadinaya” ayuu ku doodayey Dusek oo xusey in hadii ay diidi lahaayeen in ay ciyaartu sii socoto ama ay garoonka ka baxaan in la ganaaxi lahaa.
Dhacdadu markii ay halkaasi mareyso ayaa loo yeeray Booliiska kuwaasi oo ku sameeyey baaritaan garsooraha iyagoo baaritaan neefta ah laga qaaday sidaasina lagu ogaaday in qambriga uu cabey uu six ad dhaaf isaga soo dharjiyey in ka badan 9 goor ka badan inta loo ogol yahay dadka qamriga fuuqa.
Garsoore Tomas Fidra ayaa qoorta loo galiyey ganaax 12 bilood inaanu wax ciyaar ah dhexdhexaadin karin, waxaana gudiga ciyaaraha koobkaasi ay isku raaceen in mar kale dib loo wada ciyaarsiiyo labada kooxood bisha soo socota natiijadii hore la tir tiro.
Link-ga VIDEO hoose ka daawo garsoorahaasi oo lala yaaban yahay oo sarqaan la dhacdhacaya.
Diseenbar 3, 2011 at 8:21 am